Kroasia: horohoron-tany 6.0 nihorohoro ny tanànan'i Zagreb
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Kroasia: horohoron-tany 6.0 nihorohoro ny tanànan'i Zagreb
Horohoron-tany nahatratra 6.0 fotsiny no nampihozongozona ny tanànan'ny Zagreb any Kroasia tamin'ny 7.24 maraina tamin'ny Alahady teo an-toerana. 7 km miala ny afovoan-tanàna no misy ny foiben-toerany. USGS dia nampidina ny horohorontany tamin'ny 5.4 ary nanome naoty azy ho mavo.
Fampandrenesana mavo momba ny famoizan-tena mifandraika amin'ny fikororohana. Azo atao ny mamoy ny ainy ary tokony hapetraka eo an-toerana ny fiatraikany. Ny hetsika taloha miaraka amin'ity haavo fanairana ity dia nitaky valin-kafatra eo an-toerana na eo amin'ny faritra.
Ny mavo dia heverina ho mahery: Zagreb, Jankomir, Donja Bistra, Donja Stubica no vokany.
Petra Orescovic dia nilaza hoe: “Horohoron-tany lehibe tany Kroasia 10 min lasa izay. Toy ny faran'izao tontolo izao. ”
Hoy i Arana: “Salama izahay, tsy naharitra izany ary tsy nisy zavatra nianjera na nivaky. Io no faran'izay mafy indrindra tsapako teo amin'ny fiainako. ”
“Lehilahy avy any Maribor Slovenia aho (ka tsy dia akaiky izany) ary nifoha tamin'ny zava-drehetra nivadi-po aho, fomba tokony hifohazana .. tsy maintsy nampatahotra izany, indrindra ireo trano avo kokoa / Zagreb "
"Tanàna kely 40km miala Zagreb. Nangovitra ny tranoko iray manontolo, ny fandriako dia toy ny tamin'ny sary mihetsika mahatsiravina. ”
“Raha ny filazan'ny mpamaky eo an-toerana dia mbola tsy misy ny tatitra momba ny fahafatesan'olona fa fahasimbana ara-materialy 'lehibe'. Ie, tena mila horohoron-tany ny olona tao, ary nipetraka tao an-tranony lavitra ny virus… ”
Ny 2020 dia manamarika ny faha-140 taonan'ny horohorontany Great Zagreb ao Kroasia. Nilaza i Legend fa isaky ny 140 taona dia misy loza mitranga any Zagreb. Ilay horohoron-tany tamin'ny 1880 dia nandrava ny katedraly tamin'ny taonjato faha-13 izay mamirapiratra amin'ny endrika vaovao. Miandry fatratra ny taona 2021…
Zagreb, renivohitr'i Kroasia avaratra andrefana, dia miavaka amin'ny maritrano Austro-Hongroà taonjato faha-18 sy faha-19. Eo afovoany, i Upper Town no toerana misy ny Katedraly Zagreb misy kambana ary fiangonana St. Mark's tamin'ny taonjato faha-13, misy tafo miloko marevaka
Ity dia tantara misongadina ary havaozina.
Nanapaka an'i Hawaii tamin'ny mpanadio tanana i Amazon: nanao hetsika ny Whisky Distillery sy ny US Marine teo aloha
Ny fanjakana amerikanina voalohany any Etazonia dia mametaka sisintany ho an'ny rehetra